2nd Joint International Conference on Maritime Cooperation သို့ တက်ရောက် ဆွေးနွေးခြင်း
သေနင်္ဂမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးဖွဲ့ Founder & Executive Director ဒေါက်တာနိုင်ဆွေဦးသည် နိုဝင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့က နေပြည်တော် Hilton ဟိုတယ်တွင် ပြုလုပ်သော ဒုတိယအကြိမ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ…
စက်တင်ဘာလအတွက် သတင်းအချက်အလက် ကောက်နှုတ်ချက်များ
DOWNLOAD ပြုလုပ်ရန် September Monthly Diary
မြန်မာနိုင်ငံက လေ့လာသူအဖြစ် ပါဝင်မည့် ရွှေမြွေဟောက် လေ့ကျင့်ခန်း – ၂၀၁၈ (Cobra Gold – 2018)
ထိုင်းနှင့် အမေရိကန်တို့သည် နှစ်စဉ် ပြုလုပ်မြဲဖြစ်သည့် အာရှ – ပစိဖိတ်ဒေသ၏ အကြီးဆုံးလေ့ကျင့်ခန်း ရွှေမြွေဟောက် (Cobra Gold) အား လာမည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃…
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Naval Postgraduate School မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
သေနင်္ဂမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးအဖွဲ့ တည်ထောင်သူနှင့် အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာနိုင်ဆွေဦးနှင့် ဦးသိန်းထွန်းဦးတို့သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ရေတပ်ဘွဲ့လွန်သင်တန်းကျောင်း (Naval Postgraduate School) မှ Program Manager…
သြဂုတ်လအတွက် သတင်းအချက်အလက် ကောက်နှုတ်ချက်များ
DOWNLOAD ပြုလုပ်ရန် 8. August Monthly Diary
ဇူလိုင်လအတွက် သတင်းအချက်အလက် ကောက်နှုတ်ချက်များ
DOWNLOAD ပြုလုပ်ရန် 7. July Monthly Diary
အာဆီယံ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်းနှင့် အဖွဲ့အား တွေ့ဆုံခြင်း
သေနင်္ဂမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးအဖွဲ့ တည်ထောင်သူနှင့် အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာနိုင်ဆွေဦးနှင့် ဦးသိန်းထွန်းဦးတို့သည် စင်ကာပူနိုင်ငံ နန်ယန်းနည်းပညာတက္ကသိုလ် S. Rajaratnam School of International Studies ၏ Executive…
RAND Corporation၏ သမိုင်းကြောင်းနှင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ပြောင်းလဲ တိုးတက်လာမှု ဆက်စပ်ခြင်းအား လေ့လာခြင်း
RAND Corporation၏ သမိုင်းကြောင်းနှင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ပြောင်းလဲ တိုးတက်လာမှု ဆက်စပ်ခြင်းအား လေ့လာခြင်း နိဒါန်း ကမ္ဘာနိုင်ငံ အသီးသီးတွင် သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်များအလိုက် ဥာဏ်ကြီးရှင်…
“သတိပြုရမည့်အနောက်တံခါးမှ အကြမ်းဖက်တို့၏ အန္တရယ်”
“သတိပြုရမည့်အနောက်တံခါးမှ အကြမ်းဖက်တို့၏ အန္တရယ်” (သေနင်္ဂမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးအဖွဲ့ Founder & Executive Director Dr. နိုင်ဆွေဦး ၏ ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့ထုတ် Daily…
၂၀၁၇အတွင်း ပိုမိုဆိုးရွားလာဦးမည့် ဘင်ဂါလီတို့၏ အကြမ်းဖက်မှုများ
၂၀၁၇အတွင်း ပိုမိုဆိုးရွားလာဦးမည့် ဘင်ဂါလီတို့၏ အကြမ်းဖက်မှုများ ရေးသားသူ – ဒေါက်တာ နိုင်ဆွေဦး လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှစတင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် ပိတ်ဆို့ကာ…